प्रमिलालाई जब उनका छोराछोरीले प्रहरी कार्यालयमै भेटे, छोराले भने ‘ममी घर हिड्नुस्’ … ! (भिडियो हेर्नुस्) – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/प्रमिलालाई जब उनका छोराछोरीले प्रहरी कार्यालयमै भेटे, छोराले भने ‘ममी घर हिड्नुस्’ … ! (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । एक महिना भन्दा धेरै दिन देखि सम्पर्क विहिन भएकी प्रमिला सुनारका दुई छोराछोरीले आज प्रहरी कार्यालयमा भेटेका छन् । आमा अर्कै पुरुषसंग सुनवलमा फेला परेपछि प्रहरीले कार्यालयमा लिएर गएको थियो । उनलाई सुनौली स्थित एक कोठावाट प्रहरीले लिएर गएको हो । उनी नेपालगन्जमा एक पुरुषसंग एक महिना यता संगै बस्दै आएको छिमेकीले बताएका छन् । श्रीमती सम्पर्क विहिन भएपछि चितवनका सन्तोष सुनार रुँदै मिडियामा श्रीमतीको खोजिका लागि सहयोग माग्न थालेका थिए । एक महिना पछि उनी अन्तत फेला परेकी छन् ।
दुई बालबालिकाले यतिका दिन पछि आमालाई देख्न पाउँदा माया लागेको बताए । युट्युवरले ति साना बालबालिकालाई प्रश्न सोध्दा दिपा त बोल्नै सकिनन् । बशन्तले भने आमालाई पहिलो पटक भेट्दा नरमाइलो लागेको बताए । उनी आमालाई देखेर रोए त्यतीबेला आमाले नरोउ भनेर भन्दा प्रहरी आन्टीले आमालाई पिटेको बताए । ममीलाई पिटेको देखेर प्रहरी आन्टी देखि रिस उठेको बताए । ममीको हालत देखेर निकै रुन मन लागेको बताए । बुवासंग बसेर आफु रोएको सुनाए ।
श्रीमती हराएको भन्ने खबर सुनेर बिदेशबाट ईमरजेन्सी भिजामा आएका श्रीमान बिगतका केहि दिनदेखि रुँदै श्रीमतीको खोजीमा लागेका थिए भने उनले सबै मिडियालाई सहयोगको लागि अपिल गरेका थिए।
नायिका मिरुना मगरलाई फिल्म हलभित्र हात पात गर्ने खोज्ने युवकलाई यस्तो कडा सजाय दिने तयारी थालियो, हालियो मुद्धा।